Soo dejisan Framaroot 1.9.3 – Vessoft
Framaroot – fudud ah si ay u isticmaalaan codsi in la baabi’iyo oo dhan xayiraad ku ay hindiseen. Software ayaa awood u si aad u hesho xidid-helidda qalabka inta badan lagu daydo iyo saarayaasha kala duwan. Framaroot rakibtay software dheeraad ah si ay u maareeyaan iyo qaybiyo ah xidid-xuquuqda ee codsiyada kala duwan. Framaroot fursadaa ka mid ah Guulaha la heli karo in loo soo bandhigay qaab ah magacyada jilayaasha kala duwan oo ay dhacdo in xayiraad tirtiridda waxa wargelinaysaa user ku saabsan dhamaystiran guul ah geeddi-socodka. Ka dib markii howleheedii user qalabka hesha xuquuqda ay u maareeyaan codsiyada la xareeyay.
Doorashada Guulaha la heli karo
Soo dejisan Framaroot
Faallo ku saabsan Framaroot
Framaroot Xirfadaha la xiriira